Izinto eziluncedo nezingalunganga zeerabha ezahlukahlukeneyo
Irabha yendalo NR (Irabha yeNdalo) yenziwe ngerabha yokuqokelela umthi ngerabha, yipolymer yeisoprene. Inokuxhathisa kokunxiba okuhle, ukuqina okuphezulu, ukophula amandla kunye nobude. Kulula ukuguga emoyeni kwaye kuyabambeka xa ushushu. Kulula ukwandisa kunye nokunyibilika kwioyile yezimbiwa o ...
Ukwahlulahlula irabha Ngokutsho kwe-morphology yahlulwe yirabha ekrwada, irabha, ulwelo irabha kunye nomgubo irabha. I-Latex kukusasazeka kobumdaka ngecolloidal; Irabha engamanzi yeoligomer yerabha, engafakwanga nkcenkceshelwa ngaphambi kolwelo olubonakalayo ngokubanzi; Powder yerabha yi-latex processing int ...
Irabha yinto yeplastikhi ecekeceke kakhulu enezinto eziguqulwayo eziguqulwayo ……
Irabha yinto ephathekayo ye-polymer e-elastic kunye ne-deformation eguqukayo. I-elastic kwiqondo lokushisa kwegumbi kwaye ingavelisa i-deformation enkulu phantsi kwesenzo samandla angaphandle. Emva kokususa amandla angaphandle, inokubuyiselwa kwimeko yayo yantlandlolo. Irabha yi po amorphous ngokupheleleyo ...